चुम भ्यालीकी फुन्जोको त्यो सगरमाथा यात्रा - Always Tourism
चुम भ्यालीकी फुन्जोको त्यो सगरमाथा यात्रा
सन् २०१० तिर फून्जो थात थलो चुम भ्यालीबाट अमेरिका उडीन । यहाँबाट सुरु भएको उनको जीन्दगी “दियर इज अल्वेज ग्रिनरी अन द अदर साइड अफ फेन्स” भने जस्तो उनलाई नेपालका पहाड र पर्वतको चुम्वकिय शक्तिले फेरी समुन्द्र तर्न लालयित बनायो । फुन्जोले अधिकांश नेपालीको सपनाको देश अमेरिकाको बसाईलाई टुङग्याउँदै नेपाल फर्किइन । उनले नेपालमा लङ लाईफ रेस्क्युमा काम गर्न थालिन जुन आफैमा साहसिक थियो । हेलिकप्टरको माध्यमबाट हिमाली पदयात्रामा अड्केका, फसेका मान्छेलाई डोरीको माध्यमबाट उद्धार गर्ने कामकै सिलसिलामा उनी स्विजरल्यान्ड पुगिन । त्यहाँ उनको साहसिक क्रियाकलापका कामको पुनरावलोकन हुँदा सवैले उनलाई हिमाल चढ्न योग्य पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरे ।
हिमाल त चढ्ने तर कुन ? कहाँबाट सुरु गर्ने ? यही सोचाईमा रहेकी उनलाई आफनै देशकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाले आकर्षित ग¥यो । सन् २०१५ मा सगरमाथाको आरोहणलाई ७.८ म्याग्नीच्यूडको महाभुकम्पको धक्काले वेसक्याम्पमा नै रोकिदियो । सगरमाथाको वेसक्याम्पमा रोकिएकी फून्जोले २०१६ मा अलस्काको डेनालीको सफल आरोहण गरिन । त्यसको लगत्तै चोयु, त्यसको १० दिनको अन्तरालमा आमादब्लम र २०१७ मा मनास्लुको चुचुरोमा आफनो कर्मशिल पाईला राख्न सफल भईन । विश्वका यी अग्ला कहलिएका जटिल र कठिन चुचुराको सफलताले उनलाई थप हौसला थप्ने काम ग¥यो ।
त्यसपछि उनले सगरमाथालाई आफनो गन्तव्य बनाइन । उनलाई लाग्यो सगरमाथा त चढ्ने तर अतिरिक्त केही रेकर्ड राख्न पाए हुने ? सामान्य रुपमा त धेरैले सगरमाथा चढी रहेकै छन् । अन्तरमनको यो द्धन्द्धले उनलाई सवैभन्दा छोटो समयमा सगरमाथा चढ्ने महिला आरोहीको रुपमा आफूलाई सगरमाथा चढाउने निधो गरिन ।
जब सगरमाथा आरोहणका लागि उनी उकालो लागिन तब उनमा ज्यादै उत्साह थियो । क्याम्प २ सम्म सवै योजना मुताविक नै थियो तर त्यहाँबाट माथि अक्सिजनको माक्स लगाउनै पर्ने भयोे । विडम्बना उनको सहयोगी शेर्पा भाईको अक्सिजनको रेगुलेटरमा समस्या देखाप¥यो । वेसक्याम्पबाट लाएजन अफिसरलाई साक्षि राखेर सुरु गरेको यो इतिहास रच्ने आरोहणमा शेर्पाको अक्सिजन माक्समा आएको गड्बडीले उनलाई समस्यामा पारिदियोे । उनको अगाडी अव तिन विकल्पहरु थिए । पहिलो सहयोगी शेर्पा भाईलाई छाडेर एक्लै शिखर उक्लने । दोश्रो सहयोगी शेर्पाको माक्स मर्मत गराएर वा नयाँ जगेडा राखेर शिखर लम्कने र तेस्रो पुन वेसक्याम्प जाने अनि फेरी लायजन अफिसरलाई साक्षि राखेर रेकर्ड सुरु गर्ने ।
मध्यरातमा उनको ठन्डा दिमागले सोच्यो सहयोगी शेर्पाभाई अन्कन्टार ठाउँमा छोडेर जान मनलागेन । उनलाई साथैमा विस्तारै माथितिर लगिन । १८ वर्षिय सहयोगी शेर्पा भाईलाई सँगै उकालिन । २ घण्टामा गरिसक्नुपर्ने क्याम्प २ देखी ३ सम्मको यात्रालाई ३ घण्टा लाग्यो । क्याम्प ३ मा मास्क प्रबन्ध गर्न उनले अनेक उपाय रचिन तर सफल हुन सकिनन् । त्यसपछि सहयोगी शेर्पा भाईलाई क्याम्प २ तिर फिर्ता पठाइन किनकी माक्सविना त्यसभन्दा माथि जानु अत्यन्तै जोखिम थियो । फुन्जोले सो रात क्याम्प तिनमा नै रात विताइन । भोलिपल्ट मास्क सहित शेर्पा भाई आए । तव फुन्जोले रेकर्ड भन्दा सफल आरोहणलाई आफनो लक्ष्य बनाइन । यात्रामा रणनीति फेर्नुपर्दा उनलाई अप्ठ्यारो भएको थियो तर अव सुरक्षित आरोहण मात्र उनको एक विकल्प थियो । दिउँसो ४ बजे समिटको लागि अघि बढिन, क्याम्प ४ मा पाँच घण्टामा पुगेर तातो पानी खाजा पिएर राति १२ बजे समिटको लागि प्रस्थान गरिन । मे १७ को एकाबिहानै ६ बजेर २६ मिनेट जादाँ सगरमाथाको चुचुरोमा आफनो पाइला राख्न पाउँदा खुसीले गदगद भइन । करिब आधा घण्टा चुचुरोमा बिताएर उनी तल फर्किइन । ३८ घण्टा ५० मिनेटको समयमा रचिएको उनको यो आरोहणले उनलाई जीवनमा थप उत्साह थपेको छ ।
सन् २०१५बाट आरोहण थालेर २–३ वर्षमा नै सगरमाथा लगायतका संसारका यी अग्ला हिमालाहरुको आरोहण गर्ने फुन्जो अरु समकालिन महिला भन्दा स्वभावमा पनि फरक छिन् । फुन्जो र हिमालको एकले अर्कालाई गर्ने प्रेम र भक्तिको बुझाई र दर्शन भिन्न छ । फुन्जो हिमाल चढेकोमा कतिपनि घमण्ड गर्दिनन् । साहसिक यी आरोही पाएर कतै हिमाले पो घमण्ड गरेको छ कि ?
हिमाल आरोहणका सकारात्मक पक्षलाई प्रोत्साहन नर्गनु र दुर्घटना तथा असफलतालाई बढि बजारिकरण गर्ने संचारमाध्यम, हचुवाको भरमा सगरमाथाको कठिनाईको व्याख्या गर्ने तथा आरोहीलाई सरकारी गहना बनाएर राख्न नसक्ने सरकारी संयन्त्र तथा आरोहीहरुको विदेशमोह तथा पलायन एवं हिमालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रति फुन्जोको गुनासो छ । उनको यो हिमालयात्राको हिमनदी बल्ल बग्न सुरु गरेको छ जुन दुर सागरमा पुग्ने छ एकदिन र आफु जन्मि हुर्केको सुन्दर चुम उपत्यकाको असुन्दर पक्षलाई पन्छाउन पुग्नेछिन । चुम भ्यालमिा ठूलो हस्पिटल होइन सानो सुविधासम्पन्न हेल्थ पोष्ट नै काफी छ भन्छिन उनी ।
हिजोका न्यूजिल्यान्डका एडमण्ड हिलारी र खुम्बुका हाम्रै तेन्जिङ नोर्गेले सम्भव तुल्याएको सगरमाथा आरोहणमा आजकी युवती फुन्जोले सगरमाथा चढेर सारा नेपाल र नेपालीको सम्मान र गर्व बढाइरहेकी छिन् ।
(पर्यटन क्षेत्रमा कलम चलाउने घिमिरे, अलवेज टुरिजम डट कमका उप सम्पादक हुनुहुन्छ । )
टानको पहलमा पोखरामा ५ दिने व्यवसाय व्यवस्थापन तालिम सुरू
पोखरा, टान पश्चिमान्चल क्षेत्रीय संघ, पोखरा र औधोगीक ब्यबसाय बिकास प्रतिष्ठान पोखरा शाखाको संयुक्त आयोजनामा आजबाट ५ दिने “ब्यबसाय ब्यबस्थापन तालिम सुरु भएको...
दोश्रो मिस टुरिजम कात्तिकमा हुँदै
काठमाण्डौ, प्वाईन्ट मिडियाले आगामी कात्तिक १८ गते दोश्रो मिस टुरिजम–२०१७ को आयोजना गर्ने बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ । भाद्र १९...